Ubusuku obuyisihlanu eqhubeka noFreddy kuFizzdy Pizzeria Simulator kaFreddy Fazbear - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ubusuku obuhlanu eqhubeka noFreddy ePizzeria Simulator kaFreddy Fazbear
Ubusuku obuhlanu eqhubeka noFreddy ePizzeria Simulator kaFreddy Fazbear
by UShaun Horton December 7, 2017
ebhalwe ngu UShaun Horton December 7, 2017
UScott Cawthon ungumuntu okhohlisayo. Ama-Nights akhe amahlanu ochungechungeni lukaFreddy anamaqanda e-Easter namacebo okufunda anamathele ngokujulile kukhodi yemidlalo kangangokuba kufanele uzibuze ukuthi kwesinye isikhathi umuntu angawathola kanjani. Ngakho-ke akumele kusimangaze ukuthola ukuthi ukhiphe okulindelwe kakhulu i-Five Night's ku-Freddy's 6 efihliwe ngaphakathi komunye umdlalo. Ngemuva kwesimemezelo sokuthi i-FNAF 6 ikhanseliwe ekupheleni kukaJuni, IPizzeria Simulator kaFreddy Fazbear isiphumele kithina ekuqaleni kwaleli sonto, futhi ngayo, isenzo esilandelayo kumaNight Five eNdabeni kaFreddy.
Njengoba isihloko sisho, umdlalo ubonakala njengomdlalo webhizinisi le-simulator. Uqala ngendawo yokudlela eyisisekelo bese uthenga izibani, amapuleti, imidlalo, kanye ne-animatronics. Uyazibeka, uzinakekele, wamukele uxhaso, ama-oda amapuleti nama-napkin, bese uprinta amaphosta. Uze umangalelwe uma usebenzisa okokusebenza okunephutha noma ungayinakekeli, futhi abantu bayalimala.
Ngamaqiniso weFive Night ngesimo sikaFreddy, uma uvule indawo yakho yokudlela yosuku, ubuyela ehhovisi, lapho usegumbini elincane futhi kufanele ubhekane nezinto eziza kuwe ngama-vents ngenkathi usebenza.
Isithombe ngezilokotho ze-youtube.com
Kulabo abafuna ukungena kulore, hhayi kuphela ongathenga nokubeka imidlalo ku-pizzeria yakho, ungawadlala futhi! Lapho ubashaya, noma ufinyelela elinye iqophamlando, iningi labo likunikeza isiqeshana sendaba esimayelana ne-franchise. Ungalenzi iphutha nokho, lo mdlalo unengxenye yendaba ongayitshela, oyothola ngokusebenza indlela yakho kulo mdlalo.
Uma usukulungele ukuzama isandla sakho kumdlalo wakamuva kumaNight Five kuFreddy's itholakala ku-Steam njengamanje, futhi okuhle kunakho konke, kumahhala!
Uma udidekile ngomugqa wendaba kuze kube manje, noma udinga ukuvuselelwa kulo lonke uchungechunge, ungahlola futhi umugqa wesikhathi ogcwele owenziwe yi-YI-akhawunti ye-ouTube Game Theory.
Amaminithi amahlanu ku-Freddy's
UShaun Horton ungumbhali wamanoveli e-sci-fi / horror uHana no-Class 5, kanye ne-cryptid horror Cenote. Ubhala ese-pacific enhle esenyakatho-ntshonalanga, eminyene phakathi kwedolobha laseSeattle kanye namahlathi e-Olympic National Forest. Ube ngumlandeli wempilo yonke weHorror, eqala ngokubona uGremlins eneminyaka engu-4. Eminyakeni ethile kamuva, wathola umsebenzi kaStephen King, ezigcina ebusuku efunda itomu okuyi-IT. Kusukela lapho, uqhubeke nokwandisa intshisekelo ngabalobi abanjengoDean Koontz, ama-movie afana ne-Nightmare ku-Elm Street no-Alien, nochungechunge lomdlalo wevidiyo we-Dead Space ne-Resident Evil.
IStaub's Creepy 'Devil's Gate' Ithola Usuku Lokukhishwa LikaJanuwari
I-trailer yokuqala ephelele ye-'Jurassic World: Fallen Kingdom '